चिया पिउँनु हुन्छ ? मुटुरोग, क्यान्सर जस्ता रोगबाट बच्न कालो चिया पिउने गर्नुहोस् - पढेर शेयर गर्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
चिया पिउँनु हुन्छ ? मुटुरोग, क्यान्सर जस्ता रोगबाट बच्न कालो चिया पिउने गर्नुहोस् – पढेर शेयर गर्नुहोस्
मानिसहरुलाई दुध हालेको चिया पिउन खुब मनपर्ने गर्दछ । तर दुध चिया पिउदा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्दछ, त्यसैले कालो चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागी एकदमै राम्रो मानिन्छ ।
कालो चिया पिउँदा स्वास्थ्यको लागि पनि विभिन्न किसिमका फाइदाहरु हुने गर्दछन् । बिहान हर घरमा पाक्ने चिया मध्ये कालो चियाको बारेमा केही फाइदाजनक तथ्य समेत रहेका छन् ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बढाउँछ
कालो चिया एन्टी अक्सिडेन्टले भरिपूर्ण हुन्छ। जसले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउन चाहान्छन्, उनीहरुले बिहान खाली पेटमा कालो चिया पिउनु उपयुक्त हुन्छ।
क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ
नियमित बिहान एक कप कालो चिया पिउनु गर्ने हो भने क्यान्सर जस्तो भयानक रोगबाट बच्न सकिन्छ।
मुटुजन्य समस्याबाट खतरा हुँदैन
एक अध्ययन अनुसार दिनहुँ तीन कप कालो चिया पिउँदा मुटुजन्य समस्याको खतरा हुँदैन।
छिट्टै बुढोपन देखिँदैन
कालो चियामा पाईने एन्टी अक्सिडेन्टले शरीरमा भएको टाक्सिन्सलाई बाहिर निकाल्छ । यसले कारण उमेर बढेको लक्षण छिटै देखिँदैन।
पसिना गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ
कतिपयको समस्याको जड बनेको हुन्छ पसिना। कसै कसैको पसिना निकै गन्हाउने हुन्छ। यो सामान्य नभई एक समस्या नै हो।
दुध चिया, कालो चिया, अदुवा चिया कुन राम्रो र किन ? पढ्नुहोस्
यस्ता छन्, दुध हालेको चिया पिउँदा हुने बेफाइदा :
– दुध हालेको चिया धेरै पिउने मान्छेलाई यो समाचारले दुखित बनाउन सक्छ । त्यो किनभने दुध हालेको चियाले ब्रेस्ट क्यान्सरको सम्भावनालाई समेत बढाउँदै लैजान्छ ।
– बढी तातो दुध हालेको चिया पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । तातो दुध हालेको चिया पिउनुको परिणाम मुख र पेट जोड्ने नली ड्यामेज हुन सक्छ । जसको कारण क्यान्सर नै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
– दुध हालेको चियामा हुने अर्को हानिकारक तत्व भनेको ‘फ्लोराइड’ पनि हो । त्यसैले बढी चिया पियो भने हड्डी कमजोर बनाउँछ ।
– दुध हालेको चियाको अत्यधिक प्रयोगले शरीरमा युरिनको मात्रा बढाउँदै लैजान्छ । जसको कारण सोडियम, पोटासियमजस्ता मिनरलसमेत शरीरबाट बाहिर निस्कन थाल्छ । जसले शरीरलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ ।
– दुध हालेको चियामा ‘टैनिक’ र टायलिन भन्ने तत्व हुन्छ । यस्तो तत्वले शरीरमा ‘इनडाइजेसन’ बनाउन सक्छ र पेटको समस्या अझ बढ्दै जान्छ ।
– दुध हालेको चियामा भएको कफिनले मानिसमा थकान उत्पन्न गर्छ । थकित शरीरले मानिसलाई जाँगरसँग काम गर्नका लागि बाधा उत्पन्न गर्छ ।
– दुध हालेको चियामा भएको कफिनले मस्तिष्कको क्षमतामा ह्रास ल्याउने काम गर्दछ ।
– दुध हालेको चियाका लागि चिनी अत्यावश्यक मानिन्छ । बढी चिनीले बच्चाको दाँतमा असर पर्ने गर्छ ।
– दुध हालेको चियाको अत्यधिक प्रयोगले शरीरमा क्याल्सियम मात्र घटाउँदै लैजान्छ । जसले हड्डीलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ ।
– दुध हालेको चियाले बच्चाको शरीरमा ‘अनडाइजेसन’ गराउने भएकाले पेटमा समेत समस्या देखिन थाल्छ ।
– चिया तयार पार्दा चियापत्ती, दूध र चिनी कहिल्यै पनि एकैसाथ राख्नु हुँदैन । चियाका लागि पानी उम्लिसकेपछि मात्र चियापत्ती राख्नुपर्छ ।
– चियाका लागि पानी पटक–पटक उमाल्नु हुँदैन । तीन मिनेटभन्दा लामो समय उमालेको पानीमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ । त्यसले चियाको स्वादमा ह्रास ल्याउँछ ।
– पानी नउम्ली चियापत्ती राख्नु हुँदैन । उम्लिसकेको पानीमा चियापत्ती राख्दा राम्रोसँग रङ आउँछ र फ्लेबरलाई अब्बल बनाउन पनि भूमिका खेल्छ ।
– आधा घन्टाभन्दा लामो समय राखेको चिया कहिल्यै पनि पिउनु हुँदैन । लामो समयसम्म राखेको चियाले ‘इनडाइजेसन’ गराउँछ ।
Don't Miss it भोजनको नियम बारे जानिराखाैँ, कुन सिजनमा के खाने ?
Up Next लगातारको खोकी लागि रहनु राम्राे सङ्केत हाेइन, क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ एक चाेटि पढाैँ
औषधीको भण्डार बदाम, दैनिक सेवन गर्दा यस्तो फाइदै फाइदा जान्नुहोस्
भिजाएको बदामको तुलनामा अकुंरित बदाम धेरै स्वास्थ्यवर्दक हुने गर्दछ । बदामले स्तनमा दुध वृद्धि गर्दछ । कब्जियतको पीडाबाट मुक्ति पाउनका…
6 hours ago biplov
यसरी निकाल्न सकिन्छ बच्चालाई जंकफुडबाट बाहिर
अहिलेका बालबालिकाहरु घरमा पाकेको खानेकुराभन्दा जंक फुडमा रमाउँछन् । यस्ता बजारिया वस्तु खाँदा मिठा हुन्छन्, तर स्वास्थ्यका दृष्टिले हानीकारक ।यदि…
रातीको खाना ढीलाे खानुको असर यस्तो छ ! जान्नुहाेस्
राति ढीला सुत्ने र विहानपनि ढीला उठ्ने बानी आधुनिक जीवनको पर्याय जस्तै बनेको छ । यसरी राति ढीला सुत्दा मानिसहरुमा…
–एजेन्सी– खेलाडीका लागि ‘स्पोर्ट्स ड्रिङ्क’भन्दा पनि केरा राम्रो रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । खेलाडीले खेलका क्रममा उपभोग गरेका…
अनार कसरी प्रयोग गर्दा के के फाइदा हुन्छ ? (१ हजार शब्दको लेख)
नोट : कस्ता मानिसहरुले अनार खानु खतरनाक हुन्छ भन्ने जानकारीको लिंक यो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ । कृपया, त्यो पनि…
तनाव किन हुन्छ ?
वानी व्यवहारमा परिवर्तन जस्तै वढी रिसाउने, रक्सी चुरोट पिउन सुरु गर्ने वा पहिले भन्दा धेरै पिउने, आफ्नो काममा ध्यान राम्रो…
आफ्नाे शरीरको भाषा बुझ्नुहोस् ! रोग लाग्दैन
स्वास्थ्य एक अनिवार्य विषय हो र भ्रम जीवनको सत्य । हामी भ्रममा जीवन विताइरहेका हुन्छौं । चिकित्सालाई लिएर पनि हामीमा…
यसरी निको हुन्छ पायल्स
मेडिकल भाषामा पायल्सलाई हेमोरोइटर्स भनिन्छ । पायल्सको तीन चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको दिसामा रगत देखापर्नु, दोस्रोे दिसासँगै अन्य…
सर्पबारे पत्याउनै नसकिने राेचक तथ्य
१. नेपालमा जम्मा २१ प्रजातिका सर्प पाइने गर्छन । २.सर्पको टाउको, ओठ, पिठ्यूँ, पेट आदिको कत्ला र बनावटको आधारमा विषालु…